Birao fanaraha-maso MCU
MCU ho singa fototra an'ny IOT, dia nivoatra haingana tato ho ato.
Ny birao fanaraha-maso MCU, miaraka amin'ny anarana feno Unit Micro Controller, dia afaka mampifangaro puce micro-based chip, singa elektronika hafa ary PCB mifangaro mba hifehezana ny fizaran-tany ivelany. Miorina amin'ny toetra mampiavaka ny fandrefesana indostrialy sy ny zavatra fanaraha-maso, ny tontolo iainana ary ny interface, ny tabilao fanaraha-maso MCU dia mizotra amin'ny asan'ny fanaovana fanaraha-maso vola, manatsara ny fahamendrehana eo amin'ny tontolon'ny indostrialy, ary mamorona ny interface interface amin'ny rindranasa solosaina fampiharana mora sy mora. .
Ny fampiharana ny takelaka fanaraha-maso MCU:
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fanaraha-maso indostrialy tsotra, toy ny rafi-pandrefesana & fifehezana, metatra maranitra, vokatra mechatronics, interface tsara, sns. Ary ny MCU koa dia azo ampiasaina amin'ny vokatra sivily marani-tsaina, toy ny kojakojan-tokantrano, kilalao, console lalao, audiovisual fitaovana, mizana elektronika, fisoratana anarana, fitaovana any amin'ny birao, fitaovana ao an-dakozia, sns. Ny fampidirana ny MCU dia tsy hoe manatsara ny asan'ny vokatra fotsiny, manatsara ny zava-bita, fa manatratra ny vokany Use.
Ny fitsipiky ny takelaka fanaraha-maso MCU:
Ara-toekarena kokoa ny fampiasana ny fiteny C na ny fiteny fanaraha-maso hafa hanoratana ireo fizotran'ny hetsika fanaraha-maso hahatratra ny tanjona faratampon'ny fifehezana indostrialy.
Ny fahafahan'ny MCU:
Fitaovana fototra: FR-4
Hatevin'ny varahina: 17.5um-175um (0.5oz-5oz)
Hatevin'ny birao: 0.21mm ~ 7.0mm
Min. Hole habe: 0.10mm
Min. Sakan'ny tsipika: 3mil
Min. Fielanelana: 3 Mil (0,075 Mm)
Famaranana ety ambonin'ny: HASL
Sosona: 1 ~ 32 sosona
Fandeferana amin'ny lavaka: PTH: ± 0.076mm, NTPH: ± 0.05mm
Saron-tava solder Color: Green / White / Black / Red / Yellow / Blue
Silkscreen loko: fotsy / mainty / mavo / manga
Fitsipika mahazatra: IPC-A-600G Kilasy 2, Kilasy 3
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny MCU sy PLD:
(1) MCU mifehy ny fitaovana peripheral hiasa amin'ny fanovana ny haavon'ny seranan-tsambo I / O amin'ny alàlan'ny programa iray; PLD dia manova ny firafitry ny chip amin'ny alàlan'ny programa.
(2) MCU dia puce, fa tsy azo ampiasaina mivantana; Ny PLC dia manana interface efa vonona, tena mety sy azo antoka ny fampiasana mivantana eo amin'ny sehatry ny indostria, ary avy eo mifandray amin'ny sehatr'asan'ny milina ho an'ny fanaraha-maso mivantana.
(3) MCU puce dia mora, ary ampiasaina amin'ny fifehezana mandeha ho azy ny vokatra batch amin'ny indostrian'ny famokarana; PLC dia mety amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy indostrialy.